कसरी अन्यायीलाई बहाना चाहिन्छ ? – हरेक मानिसले एक पटक हेर्नै पर्ने – tvNepali.net
कसरी अन्यायीलाई बहाना चाहिन्छ ? – हरेक मानिसले एक पटक हेर्नै पर्ने
मानिसहरुलाई यतिबेला अरुलाई उछिनेर अगाडी मात्र बढ्नु छ । आफ्नो कारणले अरुलाई चोट पुगोस वा नपुगोस यो कुरा उनीहरुलाई कुनै मतलबनै हुदैन । उनीहरु सफलता हाशिल गर्नका लागी पनि अन्याय सम्म गर्न सक्छन र उनीहरु यसका लागी हजारौ बहानाहरु बनाउने गर्दछन ।
यदि हाम्रै देश नेपालको कुरा गर्ने हो भने यहाँ नेताहरु चुनाव जित्नका लागी नानाथरीका बाचाहरु जनतालाई दिने गर्दछन तर जब उनीहरु एउटा पदमा पुग्छन तब तिनीहरु ति सब बाचा बिर्सिने गर्दछन । यो पनि एउटा जनतालाई गरिएको अन्यायनै त हो । अझ स्पष्ट हुनका लागी भिडियो हेर्नुहोस् :
PreviousPrevious post:यदि दुधमा अमिलो हाल्यो भने दुध फाट्छ, कसरी ? जान्नुहोस्
Next Next post:सफल हुन चाहनुहुन्छ भने एक पटक अवश्य हेर्नुहोस् ( भिडियोसहित )